Temple Ukuma Kwekhekhe - Imagazini yoyilo
Ukuma Kwekhekhe Ukusuka ekukhulekeni okuthandwayo kokubhaka kwasekhaya sinokubona isidingo sokuma kwekhekhe esilixesha, esinokuthi sigcinwe ngokulula ekhabhathini okanye kwidrowa. Ukucoca ngokulula kunye nokuhlamba kwisitya kukhuselekile. Itempile kulula ukuyihlanganisa kwaye inomdla ngokutsala iipleyiti ngaphezulu komgogodla ophakathi kwetephu. Iidisastage ilula ngokulula nje ukuyilahla emva. Zonke izinto eziphambili ze-4 zibanjwe kunye yiStacker. Istacker sinceda ukugcina zonke izinto zidityanisiwe ukugcina okuninzi okune-compact. Ungasebenzisa ukucwangciswa kweetafile ezahlukeneyo ngezihlandlo ezahlukeneyo.
Igama leprojekthi : Temple, Igama labayili : Chris Woodward, Igama lomthengi : CWD ltd .